SAWIRO:-Hadal-jeedinta Musharixiinta jubbaland oo maana bilaamaysa iyadoo jirto xiisad ka taagan kismaayo — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA SAWIRO:-Hadal-jeedinta Musharixiinta jubbaland oo maana bilaamaysa iyadoo jirto xiisad ka taagan kismaayo
SAWIRO:-Hadal-jeedinta Musharixiinta jubbaland oo maana bilaamaysa iyadoo jirto xiisad ka taagan kismaayo
Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hosoe gaar ahaan Hoolka doorashada ayaa la filayaa in daqiiqadaha soo socda inay ka bilaabato hadal-jeedinta musharixiinta Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland.
Xarunta waxaa haatan ku sugan Xildhibaannada Cusub ee Baarlamaanka Jubbaland iyo qaar ka mid ah musharixiinta Madaxweynaha,waxaana Xildhibaannada ay dhageysan doonaan khudbadaha musharixiinta oo soo bandhigaya waxa ay qaban doonaan hadii ay guuleystaan.
22-ka Bishan oo ku began Maalinta Khamiista ah ee Todobadkan ayaa la filayaa in la qabto doorashada Madaxweynaha Jubbaland oo ay u taagan yihiin musharixiin uu ka mid yahay Madaxweynaha waqtiga xilheyntiisa ay dhamaatay ee Axmed Maxamed Islaam.
Amaanka halka lagu qabanayo doorashada Madaxweynaah Jubabland ayaa waxaa siwadajir ah u xaqiijinaya Ciidamada booliska Jubbaland iyo kuwa AMISOM oo todobadyo ka hor lagu wareejiyay.
Previous articleAl-Shabaab oo dagaal kula wareegatay saldhig ku yaaal duleedka Jowhar
Next articleWAR DEGDEG AH:Dagaal culus oo sababey khasaare Dhimasho iyo Dhaawac oo dhexmarey Puntland & Somaliland
Xildhibaano Kenyaan ah oo eedeyn loogu jeediyey iney haystaan dhalashada Soomaaliya.
Madaxda dalka oo ka qeyb galay Janaaso lagu dukaday Meydka Eng...
Modified date: August 4, 2019